फुटबलमा फ्रेन्चाइज लिग : सम्भावना भन्दा समस्या बढी | Hamro Khelkud
मंगलबार, पुस १७, २०७५
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट (एनएसईएम) ले मंगलबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को आयोजनाको लागि सम्झौता गरे । सम्झौताअनुसार एन्फाले एनएसएलको प्राविधिक र खेल पूर्वाधारको पाटो हेर्नेछ भने चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीको कम्पनि एनएसईएमले प्रतियोगिताको व्यापारिक, व्यवस्थापनलगायत अन्य पाटो सम्हाल्नेछ ।
एन्फाले पछिल्लो समय अन्य विविध प्रतियोगिता गर्ने वाचा पनि गरेको छ । कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले एनएसएलको लागि एन्फाले आवश्यक गृहकार्य गरेको र यस प्रतियोगितालाई एन्फाको वार्षिक क्यालेन्डरमा उचित स्थान दिन सकिने हुनाले नै अगाडी बढेको जानकारी दिए । अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार फ्रेन्चाइज लिग नेपाली फुटबलमा नयाँ आयाम ल्याउने कडीको रुपमा स्थापित हुनेछ । तर, अहिले कायम रहेको स्थापित लिग फुटबल नै राम्रोसँग गर्न धौ-धौ परेको अवस्थामा फ्रेन्चाइज लिगमा हात हाल्नु कतिको उपयुक्त छ त ? यसका सम्भावना के छन् ? यसको भविष्य कस्तो रहनेछ ?
फिफाको विधानअनुसार कुनैपनि देशको आधिकारिक लिगमा कुनैपनि टोलीले खेल प्रदर्शनको आधारमा नै सहभागिता जनाउन पाउने हुनुपर्छ । विधानमा लेखिएको छ, ‘कुनैपनि क्लबले देशको फुटबल लिगमा सहभागिता जनाउने मुख्य आधार खेलमा सहभागिता र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । एक क्लबले देशको लिग फुटबल खेल्न कुनै श्रेणीको लिग खेल्ने र सिजनको अन्त्यमा त्यहीं रहने अथवा बढुवा र घटुवा हुनुपर्नेछ ।’
नेपालमा अहिले अधिकारिक रुपमा स्थापित रहेको सहिद स्मारक लिग विक्रम संवत २०११ देखि खेलिंदै आएको छ । हाल सहिद स्मारक लिगमा तीन श्रेणी (ए,बी र सी) छन् । यसबीचमा थुप्रै क्लबले उपाधिको स्वाद चाखेका छन् त उपाधि जितेकै कति क्लबको अस्तित्व बिलिन भइसकेको छ । आधुनिक फुटबलको गतिमा चल्न नसक्दा केहि क्लब हराएका छन् । केहि यस्ता क्लब पनि छन् जसले आधुनिक फुटबलको परिवर्तन अँगाल्दै छोटो समयमै शीर्ष डिभिजनको यात्रा पनि तय गरेका छन् ।
एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा
सहिद स्मारक लिग हरेक क्लबका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने खुला स्थल हो । हरेक वर्ष यस लिगमा खेल्न सी डिभिजन छनोटका रुपमा खुला प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । देशको कुनैपनि कुनामा रहेका क्लबले ए डिभिजन खेल्न यो प्रतियोगितालाई सुरुवाती खुड्किलाका रुपमा लिन सक्छन् । ए डिभिजन लिग राजधानी केन्द्रित भयो भन्ने तर्क यहाँनिर गलत सावित हुन्छ । देशको जुनसुकै क्लबले पनि ए डिभिजन क्लबका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न तीन श्रेणीको लिग खेले पुग्छ ।
कुनैपनि देशमा एक भन्दा बढी अधिकारिक लिग स्थापना हुनु हुँदैन । फिफाले त्यस्तो भएमा उक्त देशलाई निलम्बन गरेर समयसा नसुल्झे प्रतिबन्ध सम्म लगाउन सक्छ । वर्तमान परिपेक्षमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा दुई अधिकारिक लिगले भारतीय फुटबलको सर्वोच्च निकायलाई निकै समस्या भइरहेको छ । फिफाले सन् २०२० सम्म दुवै लिगलाई एकै गर्ने अथवा एक लिगलाई मात्र आधिकारिकता दिन भारतलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रस्तावित एनएसएलको लोगो
आई-लिग भारतको पुरानो फुटबल प्रतियोगिता हो र लामो इतिहास बोकेको क्लब पनि । यसै लिगमा भारतीय फुटबलका अब्बल क्लबहरु खेल्दै आएका छन् । इन्डियन सुपर लिग (आईएसएल) स्थापित भएको ५ वर्ष पुगेको छैन । तर व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको आबद्धताका कारण यस लिगमा राम्रो खेलाडीहरुको जमघट छ । प्रचुर आम्दानी हुने भएकाले यसै लिगमा खेलाडीहरुको आबद्धता रहेको हो । अब भारतीय लिगले कस्तो बाटो लिन्छ, त्यसमा कुनै एक पक्षलाई घाटा भने पक्कै हुने देखिन्छ ।
नेपालमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको नेपाल सुपर लिगबारे विस्तृत विवरण आइसकेको छैन । तर प्रतियोगिताको प्रारम्भिक खाका हेर्दा आयोजनाका लागि थुप्रै चुनौती तेर्सिने सम्भावना भने प्रबल छ । प्रतियोगिता सम्झौता हस्ताक्षरमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रदेशको आधारमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले ७ टोली गठन गर्ने भनिएको छ । यी सबै टोलीमा ए डिभिजन लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका १ सय ४० खेलाडीलाई बाँडिनेछ । त्यसबाहेक विदेशी खेलाडी पनि अनुबन्ध गर्न पाइने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । प्रतियोगिता सिंगल राउण्ड रोबिन र त्यसपछि ४ टोलीलाई प्लेअफमा खेलाइनेछ । जसमा कुल २५ खेल हुनेछ ।
प्रतियोगिताको खाका र संलग्न व्यक्तित्व हेर्दा पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटमा प्रचलनमा आएको फ्रेन्चाइज लिगको प्रभाव पारेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । तर विश्व खेलकुदमा क्रिकेट र फुटबल चल्ने प्रक्रिया बिल्कुल फरक छ । क्रिकेट विश्व बजारमा त्यति व्यावसायिकीकरण हुन सकेको छैन जति फुटबल भएको छ । जसकारण क्रिकेटमा क्लब भन्दा पनि राष्ट्रबीचको खेलहरु बढी हुने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट समिति (आईसीसी) ले क्लब क्रिकेट भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । आईसीसीले क्लब क्रिकेटलाई नियमन गर्ने अवस्था पनि आइसकेको छैन । तर पछिल्लो समय फ्रेन्चाइज लिगहरुको बढ्दो संख्याले आईसीसीले पनि खेलाडीले कति लिगमा खेल्न पाउने विषयमा नियमन गर्न गृहकार्य थालिसकेको छ ।
नेपाल स्पोर्ट्स एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टका निर्वाण चौधरी
विश्व फुटबलमा कुनैपनि खेलाडीले एक समयमा एक क्लबबाट मात्र औपचारिक लिग खेल्न पाउँछ । एक खेलाडी एक समयमा एक क्लबसँग मात्र अनुबन्ध हुन पाउँछ । विशेष परिस्थितिमा खेलाडी लोन (ऋण) मा केहि समयको लागि अर्को क्लबमा जाने प्रचलन पनि रहेको छ । तर पछिल्लो समय ठूला क्लबहरुले अत्यधिक खेलाडी खरिद गरेर लोनमा पठाउने चलन बढेपछि फिफाले त्यसमा पनि सिमा तोक्ने बताएको छ । यसले खेलाडी र क्लबको व्यावसायिकतामा थप सुधार आउनेछ ।
नेपालको अवस्थामा ए डिभिजन क्लबले खेलाडीलाई अनुबन्धन गरेर राखेको हुन्छ । ए डिभिजन क्लबहरुले लिगको समयपछि मोफसल प्रतियोगिता खेलेर आम्दानी गरेका हुन्छन् । त्यसो नहुँदा नियमित प्रशिक्षण गरेर विभिन्न प्रतियोगिताका लागि तयारीमा हुन्छन् । प्रस्तावित फ्रेन्चाइज लिगमा ए डिभिजन लिगका खेलाडी सहभागी गराउने विषयमा क्लबहरुको ध्यानाकर्षण हुनु उत्तिकै जरुरि छ । एक त फिफाको नियमअनुसार एकै देशमा दुई लिगको सम्भव छैन । फ्रेन्चाइज लिगमा आबद्ध हुने खेलाडी घाइते भएको अवस्थामा फर्केर क्लबलाई नै घाटा हुनेछ । फ्रेन्चाइज लिगको अवधारणा हालसम्म सार्वजनिक भएको त छैन, तर यसले थुप्रै प्रश्न भने उब्जाएको छ ।
प्रतिष्ठित सहिद स्मारक लिगको शीर्ष श्रेणीको प्रतियोगिता सकिन लागेको छ । रेलिगेसन बिना नै गरिएको यस लिगमा दर्शकको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ । यसै त रंगशालाको अभाव, त्यसमाथि खस्कँदो खेलको स्तरले पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । देशको एकमात्र सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रंगशाला वि.सं. २०७२ को महाभूकम्पयता चलेको छैन । अर्को वर्ष यो मैदान तयार हुने राखेपले जनाएको छ । तर यस्तो मिति तोक्ने काम धेरै भएका छन् र काम भने कछुवा गतिमै अगाडी बढेको छ । फ्रेन्चाइज लिग गर्न पूर्वाधारको पनि कमी नै छ ।
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको ट्रफी
समग्रमा भन्दा नेपाली फुटबलको विकासका लागि अहिलेको माग फ्रेन्चाइज लिग होइन । फ्रेन्चाइज लिगमा संलग्न हुने सम्भावना रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सहिद स्मारक लिगका क्लबहरुमा ल्याउन सके, सबै पक्षलाई लाभ हुने देखिन्छ । एकतर्फ एन्फाको फुटबललाई व्यवसायिक बनाउने लक्ष्य पनि पूरा हुने, अर्कोतर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठानको फुटबलमा होमिने इच्छा पनि । क्लबहरुलाई पनि आर्थिक रुपमा सबल बनेपछि कार्यसंचालनमा सहज हुनेछ । यससँगै खेलाडीहरुको पारिश्रमिक, खेल हुने स्थान लगायत अन्य पक्ष पनि विस्तारै बढ्नेछन् ।
फ्रेन्चाइज लिगको अवधारणालाई सुधार गरेर अगाडी लग्ने सम्भावना पनि हुन सक्छन् । सहिद स्मारक लिगका क्लबहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कुनै प्रतियोगिता आयोजना गर्नु अथवा सहिद स्मारक लिगलाई नै आधुनिकीकरण गर्ने सिलसिलामा परिवर्तन गर्ने सम्भावना नभएका हैनन् । तर त्यसको सम्भावना र त्यसपछिको भविष्य आशालाग्दो देखिन्न ।
वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली फुटबललाई अगाडी बढाउन सहिद स्मारक लिगलाई अझ राम्रोसँग अगाडी बढाउनु जरुरि छ । बी र सी डिभिजनसँगै सी डिभिजन छनोटमा राजधानीवरपर भन्दा बाहिरको क्लबलाई खेल्न प्रोत्साहन गरेर त्यसको सुरुवात गर्न सकिन्छ । लामो समयदेखि वीरगंज युथ एकेडेमीले सहिद स्मारक लिग खेल्दै आएको छ । एक समय ए डिभिजनको संघारमा पुगेको क्लब अहिले सी डिभिजनमा छ । त्यसो त कोइलापानी जस्तो ए डिभिजनमा पुगेर बिल्लीबाठ भएको उदाहरण पनि छ । त्यसको लागि संघले उचित वातावरण बनाएर सहिद स्मारक लिगलाई नै प्राथमिकतामा राख्नु नेपाली फुटबलको दिर्घकालिन विकासको लागि उत्तम हुनेछ ।